Umkhiqizi weSofa Ohamba Phambili Nefektri | AmaMede
Osofa besimanjemanje besikhumba saseMoscow yindwangu yesikhumba yokuxuba okunethezeka. Igcwaliswe nge-MEDO ifomula eliyingqayizivele le-foam enwebekayo yobukhulu obuhlukile nophaphe phansi, inikeza omunye wokunethezeka okuhle kakhulu.
IMoscow idizayinelwe nge-armrest encane, ukuthungwa okushelelayo nolayini ohlanzekile. Isihlalo sesihlalo siyathamba futhi sihlala kahle uma sihlala kuso. IMoscow nayo inezihlalo ezihlala abantu ababili nezihlalo ezimbili, izinketho ezibanzi njenge-1 + 2 + 3 noma 1 + 1 + 2 + 3. Imibala yokuxuba njengombala oyisihluthulelo kulesi sigaba, ifanele igumbi lokuphumula nendawo yomphakathi.
Igumbi lokuphumula lesimanje ifenisha italy lesikhumba lendwangu usofa usofa
I-4-Seater Sofa 2880x1020x750mm
I-3-Seater Sofa 2080x1020x750mm
1-Isihlalo Sofa 1030x1020x750mm
Izinto zangaphandle: Indwangu yefilakisi + Isikhumba sezinkomo ezingqimba ephezulu + Isikhumba se-microfiber esiqinile
Ukuhlala Cushion / Backrest Isipanji Esiphezulu
Ikhushi Ukugcwalisa Izingane Ukotini
Uzimele Wonke: Uzimele wePine
Uzimele Ophansi Insimbi Engagqwali Chassis
• Indwangu yefilakisi ye-Premium enokuthungwa okuthambile futhi okubucayi
• Ukugcinwa okulula nokuhlala isikhathi eside
• Gqoka kakhulu ukumelana nemithi yokukhokha
• Ikhwalithi engenakuqhathaniswa
Izindwangu zosofa umklamo omncane obonakala nge-slope armrest eyenzelwe ngokwe-Ergonomics. Indawo yokuhlala isesigodlweni esisodwa esigcwele isigxobo esigxunyekwe ngegwebu lokuminyana okukhulu nophaphe phansi. Umcamelo wangemuva nemicamelo kugcwele izimpaphe phansi okwenza ukuthi umcamelo uphefumule.
• Isihlalo esigcwele isiponji esigcwele
• Akunzima kakhulu, futhi akuthambile kakhulu
• Isikhukhi esibuya ngokushesha
• Ukwakha umuzwa wokuhlala efwini
Ama-Cushions Backrest kanye nezihlalo zezihlalo ezihansi ezihanjisiwe zihlanjululwa ngendlela ejwayelekile njengoba kucacisiwe ngokufakwa kwe-polyurethane foam okuguquguqukayo ukuze kuthambeke. Isigqebhezana sesihlalo nokhiye waso wangaphakathi sakhiwe ngephethini ecashile ejiyile enezindwangu ezifekethisiwe ezimbili kanye nokuthungwa kwe-quilt okugqamisa ukuma komugqa kodwa okuthambile kwesihlalo.
• Iqinile futhi izinzile
• Ukuphakama kokucabangela ukuhlanzwa kalula
Ngokhuni lwe-Pine ngensimbi trim ezungezile. Isakhiwo sesihlalo sigcwele amagwebu e-polyurethane aqinisa ukuqina okuqinile. Ama-armrests nama-backrests ku-plywood of thicknesses ahlukahlukene, agqokwe ku-high-resilience variable-density polyurethane foam. Izindawo zokubopha izingalo emuva nezindawo zangemuva zifakwa ngaphakathi kwehansi elithunyelwe phansi ukuze kutholakale ukuthamba okungeziwe, bese kwenziwa ukuhlanzwa ngendlela efanele njengoba kuchaziwe.
• Isikhumba esithambile
• Ukuthungwa okucacile nokuhle
• Ithambile kodwa ihlala isikhathi eside
• Ukuqina okuphezulu
Osofa besikhumba benziwa ngesikhumba senhlama ephezulu seNappa ngemidwebo emihle. Kulinganiswe kahle ukwethula ukubukeka okuhle. Umbala ogqamile oluhlaza okwesibhakabhaka ubamba iso ukuheha ukunakwa. Umlenze omude onesitayela futhi onomzimba omncane unikeza usofa umoya omusha.
Isakhiwo, isihlalo kanye nesembozo se-backrest isiguqo sisuswa ngokuphelele kuzo zonke izinhlobo (indwangu nesikhumba).
• Faka ijika lomzimba nge-engeli entofontofo
• Nikeza ukuphumula kweleveli ye-SPA emuva
• Yehlisa ukukhathala kosuku
Uhlelo lokuhlala lubandakanya izingcezu ezibandakanya indawo ephezulu yetafula yomthelela ocacile oboleka isigqi esinempilo kumalungiselelo. Ifakwe esikhunjeni ngesitayela sezimpahla ezinhle zesikhumba.
Isakhiwo se-backrest / armrest nokufakwa kwaso ngaphakathi ngaphakathi kwephethini lesilayidi elime mpo eliqediwe ngokuthungwa okuphindwe kabili nangokubhobhoza okuzungeze umjikelezo.
• Kungeniswe izinkuni ezisezingeni eliphakeme
• Ngamandla nobulukhuni obuhle kakhulu
• ukuqina enwetshiwe
Isakhiwo sesihlalo sokhuni lwe-pime sigcwele ukuqina okuqinile, igobolondo eliguquguqukayo le-polyurethane foam eline-high-rubbercontent elastic webbing ukukhulisa induduzo. I-backrest yensimbi iboshwe ngogwebu oluqinile lwe-polyurethane, embozwe ngosinga lokuphefumula oluboshwe ngokushisa oluhlanganiswe nomhlophe, indwangu kakotini ye-hypoallergenic yokuboleka ukuthamba.
Osofa bendwangu bangesinye sezigaba zomkhiqizo weMEDO. Sakha futhi senze osofa bendwangu abanomklamo ongaphelelwa yisikhathi nekhwalithi ephezulu.
Amasofa endwangu e-MEDO akhiwe ngenjabulo ngabasebenzi bethu abanamakhono abanolwazi oluphakathi kweminyaka engaphezu kwengu-5-10 embonini. Ngokwamukela indinganiso eqinile yokulawulwa kwekhwalithi nokunakekelwa kwemininingwane, ungathembela kukhwalithi yamasofa wendwangu ye-MEDO futhi ungabi nezimangalo ze-aftersales.
Izindwangu zamasofa zamanje zingumklamo omncane obonakala nge-slope armrest eyenzelwe ngokwe-Ergonomics. Indawo yokuhlala isesigodlweni esisodwa esigcwele isigxobo esigxunyekwe ngegwebu lokuminyana okukhulu nophaphe phansi. Umcamelo wangemuva nemicamelo kugcwele izimpaphe phansi okwenza ukuthi umcamelo uphefumule.
Umkhiqizi Wokunethezeka Wesikhumba
Sakha osofa abaphambili besikhumba ngesitayela nenduduzo. Sebenza ngesikhumba esigcwele se-cowhide lesikhumba, asilokothi siyekethise kokuqukethwe nekhwalithi.
Amasofa wesikhumba we-MEDO agxile kuzinklamo ezimbalwa zakudala futhi angene emisha nemininingwane. Sifaka emithonjeni yethu engcono kakhulu ukwenza ngamunye wabo ubuciko obukhulu emaqoqweni ethu. Imele amakghono we-MEDO ekuklanyeni nasekukhiqizeni amasofa okunethezeka. Osofa besikhumba sethu, ungakhuphuka esitolo sakho sefenisha futhi ulethe ukuzethemba kumakhasimende akho.
Osofa besikhumba banamuhla usofa wesikhumba kanokusho owenziwe ngesikhumba esigcwele okusanhlamvu. Igcwele ifomula eliyingqayizivele le-foam enwebekayo yobuningi obuhlukile nophaphe phansi, inikeza omunye wokunethezeka okuhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ungqimba olwengeziwe lwe-latex nophaphe phansi lunezela induduzo eyengeziwe emagqumeni. Umcamelo wakhe wokuhlala owanele nengalo ethambekile kuveza ukubukeka okuhle kakhulu.
Amasofa ane-armrest ephansi, ukuthungwa okushelelezi, nolayini ohlanzekile. Isihlalo somhlangano sifakwe nesikhwama esincane ukuze kuqinisekiswe ukuthamba nokunethezeka lapho sihlala kuso. Usofa wethu unezihlalo ezilodwa nezihlalo ezimbili, izinketho ezibanzi njenge-1 + 2 + 3 noma 1 + 1 + 2 + 3 no-L shape. Ifanelana negumbi lokuphumula nendawo yomphakathi.
Isofa lesikhumba isitayela sesimanje, esikhetha ngokuqinile ukuthungwa bushelelezi nokuthinta okuthambile kwesikhumba seNappa Ngaphandle kwalokho, isihlalo somcamelo esengeziwe ngesikhwama sophaphe, unokukhululeka okuthambile lapho ulele kuso. Ukubuyela emuva okulula okuncane kukhulula isikhala esithe xaxa kuwe. Lesi isigaba esivulekile esiguquguqukayo, ungangeza ikhabethe eliseceleni ukuze uthuthukise impilo.
Umlenze omude onesitayela futhi onomzimba omncane unikeza usofa umoya omusha.
Isibonelo No. Isithombe Ukucaciswa Usayizi (L * W * H)
A015 Isofa Lesibili Lendawo Yokuhlala Enengalo 1630x780x750mm
Isofa Lesithathu Lezihlalo Ngengalo 2280x780x750mm
Isihlalo Sofa Esingashadile 700x760x750mm
Isihlalo Sofa Esingashadile 780x790x1060mm
Izinto zangaphandle: Isikhumba se-Microfiber / i-flannel / ilineni / Isikhumba sezinkomo ezingqimba ephezulu
Ukuhlala Cushion & Backrest Isipanji Esiphezulu
Ikhushi Ukugcwaliswa Kukadoli Ukotini
Uzimele Ophansi Ihadiwe yehadiwe
I-A016 Isihlalo Sofa Esingashadile 860x700x820mm
Isofa Esinezihlalo Ezintathu 2300x1000x820mm
Isihlalo Sofa + seChaise 3450x2450x820mm
Ikhushi Ukugcwalisa Izimpaphe
Uzimele Wonke: Insimbi Engagqwali Yethusi Eligoqwe
Uzimele Ophansi Ithusi Lensimbi Engagqwali
D-823 I-3 Seater Sofa + i-Long Chaise 3000x1880x750mm
Isihlalo Esingashadile + 3 Seater Sofa + Long Chaise 3850x1880x750mm
Isihlalo Sofa Esingashadile 1120x960x780mm
2 Isihlalo Sofa 1900x960x780mm
3 Isihlalo Sofa 2210x960x780mm
L023A Ithebula Lesikhungo 1200x800x320mm
L023B Ithebula Lasekhoneni 600x600x445mm
Izinto zangaphandle: Indwangu Yelineni + Isikhumba esikhethekile
Ukuhlala Cushion Isipanji Esiphezulu
Ukubuyela emuva Ukugcwalisa Izimpaphe + iVelvet
Uzimele Ophansi Carbon Steel Umlenze
C + 5807 I-4 Seater Sofa + i-Long Chaise 3810x910x1630mm
C + 5807 Isofa Yesihlalo + Chaise 2290x910x885mm
Izinto zangaphandle: Indwangu yefilakisi + Isikhumba sezinkomo ezingqimba eziphezulu
Ukuhlala i-Cushion / i-backrest Isipanji Esiphezulu
IMB-889 Isofa Lesibili Lendawo Yokuhlala Enengalo 2070x950x720mm
IMB-889 Isihlalo Sofa Esingashadile 1020x950x720mm
Izinto zangaphandle: Isikhumba sezinkomo ezingqimba ephezulu
I-Backrest Cushion Ukugcwalisa Izimpaphe
Ikhushi Uphaphe Lokugcwalisa Isikhuphasi
Uzimele Wonke: Ihardware + Isibhamu esimnyama seStell Leg
D6085C 3 Isihlalo Sofa Ngengalo 2200x900x780mm
2 Isihlalo Sofa Ngengalo 180x900x780mm
Isihlalo Sofa Esingashadile 950x900x780mm
Izinto zangaphandle: Indwangu yelineni / Indwangu yobuchwepheshe Indwangu / ungqimba oluphezulu lwesikhumba senkomo
Ukuhlala Cushion Ukuqina okuphezulu kwesiponji / ukugcwalisa izimpaphe
Langaphambilini Iwindi Elihambisanayo
Olandelayo: I-Casement Window